तनावबाट मुक्त हुन के गर्ने ? - UjyaloNepal
यसको लागि केही उपायहरु हुन्छन्, जसले दिमागलाई तनावमुक्त गराएर खुला दिमागबाट सबै काम सफल गराउन मद्धत गर्छ । तनावको कारण पत्ता लगाउनुहोस्
तनाव पूरा तरिकाले गायब हुन्छ जब हामी समस्या समाधानको लागि साहस उठाउँछौं । यस्तो साहसले खराबभन्दा खराब स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । तर त्यो दीर्घकालीन होइन भनेर सामना गर्न सक्नुपर्छ । जसले सधै्रंको लागि तनावबाट मुक्ति दिन्छ । गराउन सक्छ ।- अनलाइनखबर
नेता नेपालको नयाँ पार्टिको नाम हेरफेरमा ब्यस्त !
२०७८ बैशाख १९ गते, आईतवार प्रकाशित Ujyalo Nepal 0